Ny fomba handraisin’ny mpiandraikitry ny voucher anjara amin’ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny | UNICEF Madagasikara
Ny fomba handraisin’ny mpiandraikitry ny voucher anjara amin’ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny
Ao anatin'ny fampiharana ny Tetik’asa fanatsarana ny vokatra ara-tsakafo (PARN) dia napetraka ny rafi-piantohana « voucher » eny anivon’ireo tobim-pahasalamana fototra (CSB) any amin'ireo faritra misitraka ilay tolotra. Natsangana ity rafitra ity mba hahafahan'ny ankizy latsaky ny 5 taona, ny vehivavy bevohoka sy ny vehivavy vao teraka misitraka ny fandraisana an-tanana maimaimpoana. Entina miantoka ny fiasan'ilay rafitra araka ny tokony ho izy dia hisy mpiandraikitra ny voucher ho tendrena hiasa ao anatin'ny CSB tsirairay avy mba hiantohana ny fisoratana anaran'ireo mpisitraka izany sy ny fisian’ny tapakila izay natao ho antontan-taratasy azahoana famerenam-bola.
Ramatoa Ravelomanantsoa Faraniaina Claudia dia mpiandraikitra ny voucher eo anivon’ny CSB2 Bevato, Distrikan’ny fahasalamana ao Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava, nanomboka ny volana novambra 2020, fanombohana ny fampiharana ilay rafitra ao amin'io faritra io. Miasa 7 ora isan'andro izy araka ny fandaharam-potoana mahazatra ao amin'ny CSB, fa indray mandeha isan-kerinandro kosa, ny talata, andro tsena, dia miasa bebe kokoa izy mba hahazoany antoka fa ho voaray avokoa ireo olona marobe tonga hisitraka izany. Amin'ny antsalany, izy dia mandray olona 230 isam-bolana (vehivavy bevohoka, vehivavy vao teraka ary zaza latsaky ny 5 taona) ary manao fizaham-pahasalamana ho an’ny olona manodidina ny dimy ambin'ny folo isan'andro, ka ny ankamaroan'izy ireo (85%) dia zaza latsaky ny 5 taona.
« Tiako ny asako satria ao anatin’ny asako dia manampy betsaka ny mponina aho, indrindra ireo marefo, amin'ny alàlan’ny fampihenana ny fandaniana rehefa marary. Satria mipetraka any ambanivohitra aho dia tsapako fa fianakaviana maro no voafetra ara-bola mba hahafahan’izy ireo mitsabo tena, » hoy izy.
Ankoatry ny fandraisana anarana ireo mpisitraka ny tolotra, i Ramatoa Ravelomanantsoa Faraniaina Claudia dia takiana ihany koa mba hanao tatitra isam-bolana ahitana ny isan'ireo zaza latsaky ny 5 taona, ireo vehivavy bevohoka sy ireo vehivavy vao tera-bao nahazo fanampiana ary koa ny totalim-bidin’ny fanafody nampiasaina tao anatin’ilay rafi-piantohana « voucher ». Ny fahafaham-pony dia ny mahita ny fahafahan’ny mponina mahazo fitsaboana ara-pahasalamana sy misitraka fanafody maimaimpoana.
Noho ny famatsiam-bola avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena, ny UNICEF dia manome fanampiana ara-teknika ho fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana any amin'ireo faritra ampiharana ny Tetik’asa fanatsarana ny vokatra ara-tsakafo (PARN). Izany fanohanana ara-teknika avy amin'ny UNICEF izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny rafitry ny fampahalalam-baovao manerana ny nosy, ny fandrindrana miainga avy eny ifotony ary ny fitantanana ireo loharanom-pahalalana isan-karazany eny anivon’ny faritra, distrika ary ireo faritra manodidina.
Ny zaza izay voakarakara dia sitrana haingana
Entin'i Miraniaina any amin'ny tobim-pahasalamana avy hatrany ny zanany raha vantany vao misy soratr’aretina mba ahazoany fitsaboana ara-dalàna.